WINDOWS ZUVA - Technologies kuputsa masvingo | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi ndichitarisa paFacebook (ndiani anoti zvinongobatsira kupedza nguva?) Ini ndinowana iri nyaya inonakidza kwazvo: mumazuva mashoma ndiyo Windows Zuva.
Kwete, haisi dambe kana kugadzirwa kweesty. Izuva remahwindo.
Microsoft yakazivisa chiitiko cheLatin America neSpain munaKurume 03, uye ichave ne kutenderera kwehurukuro dzepamhepo nezviratidziro zvehunyanzvikuwedzera kune rarama hurukuro dzekutaura pamwe nenyanzvi.
Ngatione zvavanotiudza muWindowsDayBlog:
Tsvaga Chii chitsva nezve kusimudzira kwekushandisa, manejimendi, uye matekinoroji ekuparadzira paWindows Vista uye Windows 7 desktops: maitiro ekuvandudza mashandiro, nguva yekuita virtualize, maitiro ekugadzirisa ma desktops, kuwedzera kuchengetedzeka, kugadzirisa data kuwana, uye maitiro ekugadzira zvirinani mushandisi maficha.. Dzidza nezve dzese nhau dzinouya neWindows Vista SP2 uye chii chinouya neWindows 7 uye ASP.NET 4.0. Misangano yepamhepo, mademo uye mhenyu kutaurirana nenyanzvi kugona matekinoroji ekupedzisira muWindows application budiriro (uye webhu zvakare)
Isu tinoona kuti kunyangwe iri yepamhepo uye yakavhurika chiitiko, iri yakasarudzika uye yakanangana nevakagadziri pamwe nehunyanzvi hweIT. Izvi hazvireve kuti dzimwe dzehurukuro dzinonakidza kune vese vateereri. Heino yakadzikiswa yakadzikiswa vhezheni (neni) yehurukuro chirongwa chavakaronga kunyanya kune vanogadzira:
* Dambudziko redesktop mune zvakasikwa zve software uye masevhisi
Komputa yemushandisi wemakomputa ine kukosha kwakakodzera munguva yeSoftware + Services.Ndezvipi zvinonetsa kune programmers uye neavo vanoona nezve IT zvivakwa maererano nekuita kuti mushandisi ruzivo ruve rwakakosha, rune hushamwari uye runogadzira? Zvese zviripo zvekuziva nezve Windows Vista uye Windows 7.
* Kutora leap mune ino neWindows Presentation Foundation
Pfungwa dzinodikanwa mukugadzira zvinoshandiswa zvebhizinesi zvinosiyanisa WPF kubva kune mamwe matekinoroji: Masitaera, DhataBinding, iyo Presentation Model pateni, uye iyo DataGrid neRibbon zvinodzora.
* Iyo ramangwana reWebhu yekuvandudza chikuva nhasi
Chikamu chehunyanzvi chakakomberedza matekinoroji ewebhu emashandisirwo akasiyana siyana, akavakwa nematurusi anotevera. Scripting debugging, ASP.NET MVC, jQuery, Dynamic Dhata uye Client Matemplate. Chii chitsva muInternet Explorer 8 uye ASP.NET 4.0.
* Kugadzirira kwemavhidhiyo makirabhu ane Silverlight 2
Kunze kwezvinhu zvinonyanya kuzivikanwa zveSilverlight zvine chekuita nesimba remagetsi, rutsigiro rweNET mubrowser uye kuwanikwa kweiyo Base Kirasi Raibhurari.
* NaNET zviri nyore: Maitiro anoshanda neWinForms
* Roadmap muData Access neiyo .NET Sisitimu 3.5
Idzo nyowani dzekutsvaga dhata dzekuwana muVisual Studio 1 SP2008 uye .NET Sisitimu 3.5.
* Ehe, iwe unogona kushanda nevakagadziri!
Maitiro akanakisa mukugadzira nzvimbo dzemukati. Maitiro ekuwana kusangana kune zvibereko pakati peVagadziri uye Vagadziri mukugadzirwa kwevakawanda mafomu.
* Kuvandudza sechikwata neVisual Studio Team System 2008
Mashandisiro ekushandisa maturusi eVisual Studio Team System 2008, kugona kuita kubatana kunoshanda pakati penhengo dzechikwata.
* Internet Explorer 8 yeVagadziri
Maitiro ekuti uwane zvakanyanya kubva kumaturusi evakagadziri uye mashandiro ekuchengetedza vashandisi veiyo nyowani browser. CSS 2.1, kubvunzurudza kwevatengi, CSS kugadzirisa, kuenderana, zvinowedzera simba.
Pakati pemisangano yeIT nyanzvi iyo inogona kutifarira (uye isiri yakanyanyisa hunyanzvi):
* Rukoko 8 chengetedzo
Zvekuchengetedza maficha muWindows Vista neWindows 7 zvakabatana neWindows Server 2008 - mhinduro ine simba kumatambudziko matsva. Mahara Mahara uye maturusi.
* Panguva yekuona 7
Kufanana uye misiyano pakati peWindows Vista neWindows 7. Matipi ekuvandudza mashandiro nhasi.
* IE 8 inokanganisa chiitiko chevashandisi
Nyowani bhurawuza maficha, kuenderana uye chengetedzo maficha. Kugoneka, zviyero uye zvakavanzika. Chii chichaitika kuWindows 7 nemawebhusaiti.
Chinoita senge chinonyanya kufadza kwandiri ndechekuti panguva ino tinogona bvunza mibvunzo kune vakasarudzika vanhu vanopa hurukuro. Kuwedzera kukuru, kana iwe ukandibvunza.
Ndinoziva kwazvo kuti dzakawanda shamwari dzinotiverenga hadzinzwire tsitsi zvigadzirwa zveMicrosoft zvachose, asi kune avo vese vane chinangwa chekuzvipira kuzvinhu zvine chekuita nekombuta munguva pfupi iri kutevera, uyu mukana pasina mubvunzo hatigoni kurega. Kugara uchiziva zviri kuitika nenhau uye mapurojekiti emakambani makuru (tingaade kana kuti tisatsanangure basa re diki, kune imwe nhanho) ibasa rakakosha revaya vanozviti komputa sainzi. Kuziva hazviitike, uye kuziva zviri kuuya handifungi kana;).
Kwaziso kwakawanda, uyezve nemusi waMarch 3 tichaedza kuteerera kuchikamu uye ndokuzivisa iwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » ZUVA REMAWINDI - Technologies yekuputsa madziro
@Alejandro: mudiwa, kana ukaverenga bhurogu iwe unonyatso ziva kuti tinobata nenyaya dzine chekuita neese maSO.
Iwe unozozivawo kuti ini pachangu ndakataura nezveFlisol, ndakataura kuti ini ndichaenda kunotora chikamu uyezve kuti tiri kufambisa iro shoko nezvechiitiko ichi.
Ini ndinofunga kuti mune iyo posvo, kana iwe ukaiverenga zvakanyatsonaka, yakanyatsotsanangurwa kuti nei zvakakosha kuti uzive nezverudzi urwu rwechiitiko.
Uye kana iwe wakamboverenga isu, isu takatsanangura pane dzinoverengeka chikonzero chezita reblog.
Ndinokukumbira kuti uenderere mberi uchitiverenga zvakanyatso chenjera uye iwe uchawana iyo mibvunzo kumibvunzo yako yese :)
* hapana mubvunzo mhinduro ...: razz:
Pakupedzisira mumwe munhu ane zvishoma pfungwa!
Alejandro Fabrega akadaro
Ini ndinoteera yako blog mazuva ese, iwe unowanzo kushambadza zvinonakidza zvinhu ... Asi ini ndinofunga zvakanyanyisa kukosha kufambisa zviitiko zvakaita seFlisol kana zvimwe zvinhu zvakafanana pane kugadzira "mafuta muto" kune vekunze nekutonga mamongi ayo anongoda kutiita isu vane hunyanzvi. pane avo matekinoroji zvakavanzika kuti tirambe tichikunda. Zvinoshamisa kuti zvinopesana mubhurogu inonzi "linux vakapindwa muropa" kuti vanotaura nezve chiitiko chakaitwa nevarume vakanaka ava.
Pindura kuna Alejandro Fábrega
Musoro uyu unopokana ... pasina madziro, "windows" hazvingadi.
Pindura ku ignacio
Zvese zvinhu zvine diffusion, uye isu tinotaura nezve zvese zviri mune ino blog. Iwe haufanire kunyanyisa, iwe unongofanirwa kuona mimvuri.
Zvakanaka, ini handina basa nekuti unozviona sei ... Ini ndinofunga zvinhu zviviri zvinopesana zvachose hazvireve kuti chimwe ndechenhema uye chimwe ndechechokwadi ...
Ini ndinonzwisisa maitiro aN @ ty, kunyangwe nyaya idzi dzichiputsa hukama hwedu lol, ini ndanga ndisisazive maitiro ako, zvingave here kuti rudo rwedu rwasara?
Asi Alejandro akarurama zvakare, (kunze kwetoni uye mukubvunza zita racho), Microsoft inogara ichiita mhando yechiitiko uye vane mari yekuzviita, saka hapana chimwezve ... chii chazvinacho zvekare? taura hunyanzvi nezve linux futi, rangarira chibvumirano MS-NOVELL, MS-RED HAT ...? Zvakanaka, zvakakosha, zvibvumirano zvekufananidzira, ini zvakare ndinokuvimbisa kuti iwe unowana ruzivo rwuri nani nekutsvaga zvishoma paInternet pane kuenda kuzviitiko izvi.
Asi zvakadaro, ipfungwa yangu uye ndiwo maonero angu uye pamberi pazvo ndinofunga kuti ndinogona kukanganisa zvisizvo ... mira, ndeupi mhando yeruzivo iyo iyo yatinopa kune vanoda linux vakapindwa muropa ... ..
N @ ty, mudiwa wangu…. ngatirege kurwa zvakare: D
Pindura kuna raulricardo21
Zvakanaka, zvinoita kunge chiitiko chakanakisa chine madingindira akanaka andinofarira (dzidza kugadzirisa ruzivo rwevashandisi). Musangano unonakidza wekuti ungazadzise sei kutaurirana kuri nani nevakagadziri ve software.
Handifunge kuti vachataura nezvezvibvumirano naNovell kana Red Hat; Hazviratidzike sechiitiko chakakumikidzwa kune iyo mhando yemusoro wenyaya, nekuda kwemisoro yataurwa naN @ ty, mazhinji emisangano achabata nehunyanzvi hweMicrosoft pamapuratifomu eMicrosoft newebhu.
Kune avo vanotsoropodza, pamwe vanotaura chokwadi kuti chiitiko ichi chakanangana nezvenyaya dzeLinux, handifunge kuti zvakakosha kuvhara chimwe nechimwe chezviitiko zveLinux neMicrosoft, kuti ichi hachisi chirongwa, asi icho hazvishamise kuti mune ino blog tinotaura nezveMicrosoft nguva nenguva, izvo hazvisi kutikanganisa se Linux blog zvinopesana, zvinotibvumira kuti tione iyo inopesana nemaonero ezvinyorwa zvakajairika.
Hatidi kushungurudza kutora chikamu kwako nezvinhu iwe zvausingade zvakare.
Vakomana, ndizvo zvandakakuudza imwe nguva: kana tichiziva kuti zvirinani, saka kana tichinyunyuta zviri nechikonzero chakanaka;)
Zvinotaridzika kwandiri sechiitiko chakanakisa, nekuti kunyangwe ndichida kana kwete, ini ndinotarisira kurarama kubva kune basa rakabatana zvakanyanya netekinoroji. Uye zvakashata izvo zvimwe, Microsoft chiratidzo chehunyanzvi.
Musi waKurume 3 ndiri kuzoswera ndichiteerera hurukuro idzi, ndobva ndazotaura nezvadzo. Neavo vanofarira kuvateerera (uye neavo vasiri) isu tinogona kutomboita nharo nezvose ...
Kwaziso kwakawanda !!
@Byte Corrupto: iyo pikicha mu sunga yeLinus yakabudiswa naEsty inoita kuti ndipotse chiratidzo
Kana ndataura zviitiko zvakaita seizvi, ndinonzwa chishuwo chisingadzokeri chekuenda musango.
chii chinonzi trasbocar? Kudzvanya pamuromo wako ?: D
Rangarira, iyi haisi blog yeLinux chete. Iyo detoxification Center kwatinodzidza kuve vakasiyana, uye kwete kuzvivharira isu mune imwechete dingindira.
N @ ty, muzvikamu zvamunotora chikamu ndapota bvunzai kuti inoenderana microsoft chigadzirwa kana tekinoroji ingashandiswa sei chimwe chinhu chakakomba pasina kusungirwa kuMicrosoft nemitengo uye zvimwe zvinorambidzwa marezinesi ayo.
Chaizvoizvo kutaura kuti mune ino blog kunoshandiswa sekuseka, mu microsoft rave zano kwemakore mazhinji: kushandura vashandisi varo chero nhanho kuita vakapindwa muropa; kana vachingoshanda nezvigadzirwa zveMicrosoft, ndezvekuita kuti dzimwe nzira dzisagone.
Nekudaro, zvakanaka kune izvo hurukuro sekureba sekunge kutarisirwa kuri kupihwa kusiyanisa
kana Microsoft ikukweretesa ruoko
apo microsoft inokweretesa ruoko kumutsipa wako.
Ruoko muhomwe mangu ndingati ...
Ndinovimba vanotaura nezve kuhwina Ue, yakanakisa distro yavakagadzira: D.
Kubaya == kurutsa zvine simba.
Semuenzaniso: Pandinoona pikicha yeRMS zvinoita kuti ndide Trasbocar.
@heladu: havana kuzviita, zvakagadzirwa nemurume akanyangarika kubva panyika, anogona kunge akavhiyiwa epurasitiki nekuti kana vakamubata aizove nematambudziko makuru ...
@another_sam: urikundiudza iwe pachako, kana ukadya zvigadzirwa zvavo, unobvuma kubatanidzwa nazvo.
Tarisa uone muenzaniso wakanaka.
Kana iwe uchida hamburger yeMcDonalds, iwe unofanirwa kubhangi pane iro benzi clown, iye anoridza bhora uye kunyemwerera kwevashandi ... kana zvisina kudaro, kumba iwe unodzikama uchidya zvimwe zvakagadzirwa newe uye hapana anokumanikidza kuti uite chero chinhu. Pano zvakafanana. Ini ndinofunga kushandisa ASP .NET 4.0 uye inopihwa neMicrosoft.
Kumbundira kukuru, handifunge kuti vachandirega ndikubvunze izvozvo;)
N @ ty, kuti iwe unodya paMcDonalds hazvireve kuti iwe unofanirwa kunodya kuMcDonalds kana kuti zviri nani kuti iwe udaro kuti udzivise kusagadzikana.
Mibvunzo yandiri kureva ndeyerudzi "Ndingashandise ASP .NET 4.0 pane asiri-Microsoft webhu maseva zvakaenzana?" Kana, zvakawandisa, kupihwa microsoft x chigadzirwa, ndinogona kuibatanidza pamwe nezvimwe zvisiri-microsoft zvigadzirwa zvakaenzana?
Kushandisa zvigadzirwa zveMicrosoft zvine zvirevo zvinoverengeka zvekuti mune chero imwe indasitiri zvinogona kuvhundutsa uye nekukurumidza zvichazivikanwa sehunyengeri.
Kune rimwe divi, ine software, ini handizive kuti sei, kana ivo vachiedza kuita isu varanda izvo hazvingori zvinoita sekuremekedzwa asi kunyange kutonzwisisika kwatiri.
Saka ... Ziva !!!! KUTI HATISI VANHU VAKAIPA SEI !!!!!!
Test comment… Zuva reWindows riri kuuya